शुक्रबार राती ९ बजेर ५३ मिनेटमा ओलीले फोनै गरेर करिश्मा लाई यसो भनेछन्…… ! – Sunaulo Nepal TV
हजुर ठिक छ सर !! तपाई के पि ओलि ????? अ हो बिश्वस लागेन !!! लागेन सर !! अनि वाहाले सुनाएको डुङ्गा को कथा सुनेर लाग्यो यो हाम्रो के पि जी हो ।
आधुनिकता को यो दौडमा सद्भाव र मायाको दुरि मेटाउन येत्रो ठुलो मान्छे भयेर पनि सामान्य कलाकारलाई कल गरिदिनु भयेकोमा धन्यवाद के पि बुवा 🙏
Previous बर्दियामा १० बजे राति एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
Next चितवनमा साथीले लिए आफ्नै साथीको ज्यान !